Ihlathi lemimoya yomine: ngubani olibhalile, likhuluma ngani | Izincwadi Zamanje
Ngonyaka odlule le ncwadi yaqala ukudayiswa Ihlathi lemimoya yomine, inoveli yobugebengu nemfihlakalo eyathola uhlelo lwesibili ngesikhathi esifushane. Kungenzeka wake wayibona ezitolo zezincwadi futhi yakudonsa amehlo akho.
Ihlelwe eCantabria, le ncwadi ingenye yalezo ezinikeza kakhulu ukukhuluma ngazo, kepha imayelana nani Ihlathi Lemimoya Emine? Ubhalwe ngubani? Kungani kufanele uyifunde? Sizokutshela.
1 Ubani owabhala Ihlathi Lemimoya Emine
2 Ngabe Ihlathi Lemimoya Emine limayelana nani
4 Ingabe yincwadi eyingqayizivele noma i-saga?
5 Kungani Kufanele Unikeze Ihlathi Lemimoya Emine Ithuba
Ubani owabhala Ihlathi Lemimoya Emine
Ihlathi lemimoya yomine bekungeke kube yincwadi ukube umbhali uMaría Oruña ubengenawo umqondo. Kodwa-ke, njengamanye amanoveli amaningi akhuluma ngengxenye ethile yomlando, kwakudinga iminyaka eminingana yemibhalo ukuthi yonke into iboshwe futhi iboshwe kahle. Eqinisweni, ekugcineni kwencwadi umbhali uqobo utshele ukuthi yiziphi izingxenye ezingokoqobo (zendaba noma inganekwane) nokuthi iyiphi ingxenye eqanjiwe, ukuze sithole umbono ngocwaningo olukhulu alwenzile.
Kepha ngubani uMaría Oruña?
UMaría Oruña wazalwa ngo-1976 eVigo. Ungumbhali waseGalician futhi le ncwadi, Ihlathi Lemimoya Emine akuyona neze incwadi yakhe yokuqala. Impumelelo enkulu yeza kulo mbhali ephethe incwadi yakhe eyi-Puerto Escondido trilogy, izincwadi ezintathu ezishicilelwe yindlu yokushicilela yaseDestino nezimake ukuqala kwencwadi yobulelesi, ngempumelelo enkulu ngoba yasheshe yahunyushelwa olimini lwesiCatalan, isiJalimane kanye neSpanish. .
Ihlathi lemimoya emine yinoveli yakamuva yombhali, ayikhiphe ngo-2020, eboshwe ngokugcwele, kodwa lokho akuzange kumvimbe ukuthi aphumelele.
Manje, ingabe ungumbhali nje? Yebo iqiniso ukuthi cha. Ngempela Ukuqeqeshwa kwakhe kusemthethweni, ngoba ungummeli. Kepha lokho akuzange kumenze alwele ukuba ngumlobi futhi abe ngumlobi wephephabhuku. Iminyaka eyi-10 wayesebenza njengommeli wabasebenzi nabezentengiselwano, kwathi ngo-2013 kwaba lapho ethula inoveli yakhe yokuqala ezishicilele, iLa mano del arquero, eyayikhuluma ngokuhlukunyezwa emsebenzini nokuxhashazwa kwegunya. Ngokusho kombhali, le noveli ibisuselwa ezimweni yena ngokwakhe ayezazi ngomsebenzi wakhe.
Ngabe Ihlathi Lemimoya Emine limayelana nani
Kufanele wazi ngeThe Forest of the Wind Wind okuyinoveli leyo kwenzeka ngezikhathi ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, okwedlule, lapho unoDkt Vallejo noMarina, impilo yabo yansuku zonke ngekhulu le-XNUMX nakho konke lokho obekusikisela, kokubili kowesilisa nowesifazane.
Ngakolunye uhlangothi, unesipho, noJon Bécquer, uhlobo lomcwaningi osemzingeleni weqiniso, noma cha, wenganekwane.
Indaba iphambana phakathi kwale migqa emibili, ngoba bonke abalingiswa basondelene kakhulu. Kungashiwo ukuthi, yize iphuzu le-nexus lingokubulala okuxhumanisa ikhulu le-XNUMX neleJon Bécquer lamanje, njengoba inoveli iqhubeka ubona ukuthi abalingiswa bahlobene kakhulu kangakanani nemfihlakalo enkulu: inganekwane yamasongo ayisishiyagalolunye.
Ngokwale nganekwane, kwakukhona izindandatho eziyisishiyagalolunye zababhishobhi abayisishiyagalolunye ababenamandla omlingo, abakwazi ukuphulukisa. Kepha ngeke sikudalule okuningi ukuze ungakhiphi lutho olusencwadini.
Sikushiyela i- ama-synopsis:
Ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX, uDkt Vallejo wasuka eValladolid waya eGalicia kanye nendodakazi yakhe uMarina ukuyosebenza njengodokotela esigodlweni esinamandla e-Ourense. Lapho bazothola amasiko athile futhi bazobona ukuwa kweSonto. UMarina, onentshisekelo kwezokwelapha nakwezitshalo kodwa ngaphandle kwemvume yokufunda, uzolwa nezinhlangano ezisebenzisa isikhathi sakhe olwazini nasothandweni futhi uzongena obishini oluzogcina imfihlo iminyaka engaphezu kwenkulungwane.
Osukwini lwethu, uJon Bécquer, isazi semvelo esingavamile esisebenza ukuthola izingcezu zomlando ezilahlekile, uphenya inganekwane. Lapho nje eqala uphenyo lwakhe, ensimini yesigodlo esidala kwavela isidumbu sendoda egqoke umkhuba wamaBenedictine weXIX. Leli qiniso lizokwenza iBécquer ingene shi emahlathini aseGalicia ifuna izimpendulo futhi yehle ngezinyathelo ezimangazayo zesikhathi.
Ehlathini Lemimoya Emine sizohlangana nabalingiswa abaningi kodwa, bakhona abathathu babo, abavelele ngokuba nezwi lokucula, noma ngoba umbhali ugxile kuzo. Lezi izi:
Udokotela Vallejo. Ihlobene nomlingiswa (futhi oyinhloko) kaMarina, ngoba yindodakazi yakhe le. Umugqa wakhe wesikhathi ungowesikhathi esedlule, ngoba uzokutshela ngomlando wakhe ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX ngenkathi ehlala eGalicia nendodakazi yakhe ukuyosebenza njengodokotela esigodlweni sezindela sase-Ourense.
UMarina. Mhlawumbe ungumlingiswa oyinhloko weveli. Wafika esigodlweni sezindela sase-Ourense ngo-1830 futhi waqala ukuba nentshisekelo kwezokwelapha (ngubaba wakhe) nase-botany (yizindela kanye nobaba wakhe). Ngakho-ke, iphambuka kokujwayelekile "kowesifazane ngaleso sikhathi, nangaphambi kwalokhu. Isimo sakhe njengowesifazane sisho ukuthi kufanele alwe nale mikhawulo ebekiwe.
UJon Bécquer. Kungumlingiswa osuselwa kokunye owayekhona ngempela. Encwadini ungumseshi wobuciko osemuva kwenganekwane yamasongo ayisishiyagalolunye. Abanye bamchaza njenge-Indiana Jones kodwa akathandi ukumthanda ngenxa yobuntu bakhe.
Ingabe yincwadi eyingqayizivele noma i-saga?
Izikhathi eziningi, ukufunda umbhali omusha kusinikeza ukwesaba, ikakhulukazi ngenxa yemfashini yamanje yokukhipha ama-bilogies, ama-trilogies nama-sagas akhiwe ngezincwadi eziningi, lapho indaba ingapheli.
Uma futhi sibheka ukuthi ngaphambi kwalokhu, uMaría Oruña wakhipha i-trilogy, kuyinto ejwayelekile ukuthi ungabaze ukuthi le ncwadi ihlukile noma iyingxenye yesaga.
Futhi ngumbhali uqobo lwakhe okubeke kwacaca: a indaba yokuziphetha. Okungukuthi, iqala futhi iphele encwadini efanayo; ngaphandle kokuningi. Lokho kwenza lonke ucwaningo nesakhiwo kugxishwe encwadini eyodwa engafundeka kalula ezinsukwini ezimbalwa (inqobo nje uma ikuthinta, kunjalo).
Kungani Kufanele Unikeze Ihlathi Lemimoya Emine Ithuba
Usuvele wazi okuthe xaxa ngeHlathi Lemimoya Emine, kepha mhlawumbe awufuni ukuyizama okwamanje, noma awazi ukuthi kufanele uyifunde noma cha. Kunezizathu eziningana zokukwenza:
Yincwadi eyingqayizivele, eziphethelayo. Uma ungazange umfunde umbhali ngaphambilini, ukungena ku-trilogy kungaba kakhulu. Kepha ungafunda incwadi enesiqalo nesiphetho ukuthola ukuthi uyalithanda ipeni lakhe noma cha.
Imayelana ne- ingxenye yomlando waseSpain. Izikhathi eziningi sazi okuningi ngomlando wamanye amazwe kunawethu. Futhi lokho kuyadabukisa ngempela. Ngakho-ke uma ufuna ukwazi ukuthi abantu babehlala kanjani kuleyo ndawo yaseSpain ngekhulu le-XNUMX futhi ufunde nge-alchemy, botany, imithi ... ungazama.
La owesifazane unendima ehamba phambili kule noveli. Futhi sikhuluma ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye, kepha sizobona ukuthi owesifazane lapha uzithethelela kanjani ngendlela ephawuleka kakhulu.
Usufundile Ihlathi Lemimoya Emine? Ucabangani ngaye?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ihlathi lemimoya yomine